फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमण - dautarimedia.com
फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमण
६ साउन, काठमाडौं । केही दिनयता नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या फेरि बढेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार २ हजार ८३८ जना संक्रमित भेटिएका छन् । त्यस्तै मंगलबार ३ हजार १२३ र सोमबार २ हजार ४४५ जना संक्रमित भेटिएका छन् ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले पछिल्लो चार–पाँच दिनमा परीक्षण गराउन आउनेको संख्या बढेको बताए । मंगलबार १३ हजार १३५ र बुधबार १२ हजार ६१६ जनाले परीक्षण गराएका छन् ।
दैनिक पीसीआर परीक्षण गर्नेमध्ये पोजेटिभ पुष्टि हुने २५ प्रतिशत देखिन्छ । यो ठूलो संख्या हो,’ सहप्रवक्ता अधिकारीले भने ।
पछिल्लो २४ घण्टामा पीसीआर विधिबाट ८ हजार ७१५ नमुना परीक्षण गर्दा १ हजार ९१८ र एन्टिजेन विधिबाट ३ हजार ९०१ परीक्षण गर्दा ९२० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । प्रतिशतको हिसाबमा संक्रमण दर २२ प्रतिशतभन्दा बढी छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ४७५ जना डिस्चार्ज भएका छन् भने ३० जनाको मृत्यु भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या २६ हजार ८३२ छन् । जसमध्ये २४ हजार ३४० होम आइसोलेसनमा र २ हजार ४९२ जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार गएको हप्तासम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या ५०० भन्दा बढी रहेका जिल्लाको संख्या ९ थियो । यो हप्ता नवलपरासी पूर्व, रुपन्देही र कैलालीमा सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेर ५०० भन्दा माथि पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी संक्रमित पुष्टि भएको छ । त्यहाँ परीक्षण गरिएकामध्ये ४८.२ प्रतिशतमा संक्रमण देखिएको छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा संक्रमण दर ४६, गण्डकीमा ३२, प्रदेश १ मा ३१.५ प्रतिशत रहेको छ ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख एवं सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बास्तोलाले पछिल्लो समय अस्पतालमा आउने बिरामीको चाप बढ्दै गएको बताएका छन् । निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै गएपछि एकसाता यता कोरोनाको लक्षण भएका बिरामीको संख्या बढेर गएको छ ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा प्रत्येक दिन १५ देखि २० जना लक्षणसहितको कोरोना संक्रमित बिरामी इमर्जेन्सीमा आउने गरेको उनले बताए । जसमध्ये सातदेखि १० जना इमर्जेन्सीमा भर्ना हुने गरेको छ ।
आईसीयूको २४ बेडमध्ये २१ जना उपचाररत छन् । कोभिड एचडीयूमा ४० मध्ये ३५ जना उपचाररत छन् । कोभिड स्पेशल आइसोलेसनमा ५ जना उपचाररत छन् ।
Next: लगनसँगै पूरा गरे राजेशपायलले वाचा